Shir looga go’aan gaarayo Doorasho Dadweyne oo ka dhacda Soomaaliya oo maanta ka furmaya Garoowe. – Banaadir Times
Shir looga go’aan gaarayo Doorasho Dadweyne oo ka dhacda Soomaaliya oo maanta ka furmaya Garoowe.
By banaadir 29th December 2020 73 No comment
Magaalada Garoowe ee xarunta DG Puntland waxaa maanta ka furmaya Shir looga xaajoonayo Doorasho dadweyne oo Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2025-ka, kadib markii lagu guul dareystay in dalka laga hirgeliyo afti dadweyne 2016 & 2020.
Shirka waxaa lagu martigeliyay Guddoomiyaasha Golaha Shacabka, Aqalka Sare BFS, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka, Madaxweynayaal hore, Ra’iisul Wasaare hore, Madax Goboleedyo, Ururada Bulshada rayidka & Dad waaya-joog u ahaa tixanaya Dowladaha kasoo bilawday Jabuuti sanadkii 2000.
Waxaa la dhageysanayaa aragtida ka qaybgalayaasha iyo sida looga gudbi karo caqabadaha hor istaagay in Dalka ay ka dhacdo Doorasho qof & Cod ah 2016 iyo 2020, si xal loogu helo ka gudubka caqabadahaas.
Madaxweynaha DG Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in kulankaan uu kasoo baxo, maadaama maamulkiisa uu nasiib u yeeshay martigelinta kulankaan oo markii ugu horeysay lagu qabanayo Gudaha Soomaaliya.
Siciid Deni oo Kulamo gaar gaar ah la qaataty martida ka qaybgaleysa Shirka looga hadlayo sida Dalka ay uga dhici karto doorasho Dadweyne si shacabka awoodda doorashada dib loogu soo celiyo.
Haddaba, suuragal ma tahay in Soomaaliya ay ka dhacdo Doorasho Dadweyne 2025-ka, maadaama lagu guuldareystay 2016 & 2020?
Guddiga kala dhiman ee Doorashooyinka oo diyaariyay Goobaha Doorashada.
Mareykanka oo joojinaya taageerada dagaalka ka socda dalka Yemen
By banaadir 9th September 2018